MDC Yogunun’una Pamusoro peZviri Kuitwa neHurumende muKanzuru yeHarare
Harare Mayor VaJacob Mafume
Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti kumbomiswa basa kwaVaJacob Mafume sakanzura weWard 17 muHarare munongedzo wekuti hurumende iri kuda kuti muHarare musave nekugadzikana kana kusafambiswa kwebasa zvakanaka.
Izvi zvinotevera kumbomiswa basa kwaVaMafume pamwe chete nemutevedzeri wavo uye vari kanzura weWard 25, VaLuckson Mukunguma, pamwe nakanzura veWard 11, VaAnthony Shingadeya, nevakafanoobata chigaro chegurukota rezvekutongwa kwematunhu, Amai Jenfan Muswere, vachipomerwa mhosva dzine chekuita nehuwori.
Tsamba dzekumisa makanzura matatu aya basa dzakanyorwa naAmai Muswere musi wa 22 Ndira gore rino dzinoti vatatu ava vari kumiswa basa zvichitevera zvakawanikwa nechikwata chakaferefeta mhosva dzavari kupomerwa pasi pemutemo wekutongwa kwematunhu Section 114 (Chapter 29:15) wakavandudzwa muna 2016.
VaMafume naVaMukunguma vakambomiswawo zvakare basa sameya uye mutewedzeri wameya, vachipomerwa mhosva dzekuita zvehuwori mukugoverwa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatzwayo, vanoti zviri pachena kuti hurumende yeZanu PF inoda kuti muguta guru renyika musave nekugadzikana.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi raAmai Muswere sezvo vanga vasingabatike panharembozha yavo.